Dubbiin Obbo Shimallis Abdiisaa waa'ee US dubbatan 'yaada dhuunfaati'
11 months, 3 weeks ago 1499 Qoodi
Itoophiyaan hariiroo US waliin qabdu akka hammaatu akka hin barbaanne dubbi-himaan Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muuftii himan.
Hariiroon biyyoota lamaanii waggoota 100 oliif hariiroo michummaa cimaa qaban yeroo dhihoo as muddama seeneera. US dhimma Tigraay eeruun tibbana tarkaanfii Itoophiyaa irratti fudhatte mootummaan Itoophiyaa mormeera.
Guyyaa Roobii miidiyaaleef ibsa kan laatan dippiloomaatiin olaanaa Itophiyaa kun, hariiroon amma Yunaayitid Isteet waliin kan rakkoo seene 'yeroofi' jechuun dubbatan.
''Ni jijjiirama jennee hojjenna. Akka jijjiiramu danda'us mirkana. Wal hubannaan ni uumama,'' jechuun ripportarootatti dubbatan.
Itoophiyaan biyya kamuu waliin hariiroo cimsachuu akka barbaaddu kan himan qondaalli kuni, yaada Pirezidantiin Oromiyaa Obbo Shimallis dhimma tarkaanfii US irratti dhihoo dubbatan irrattis deebii kennaniiru.
Torban darbe US deeggarsa diinagdeefi nageenyaa Itoophiyaaf kennitu daangessuufi qondaaltota Itoophiyaafi Ertiraa irratti uggura tolchuu ibsite.
Kunis, rakkoo deeggarsa namoomaa Naannoo Tigraay keessa adeemuun akka walqabatu Ameerikaan ibsiteetti. Qondaaltonni Itoophiyaa garuu dhimma hidha Abbayyaa irratti ejjennoo Itoophiyaan qabatteen walqabsiisu.
Tarkaanfii US mormuun lammiileen Itoophiyaa kuma kurnaan lakkaa'aman magaalaa Finfinneefi magaalota biyyattii garaa garaa kanneen akka Dirree Dhawaa, Harar, Gaambellaafi kaanitti hiriira bahaniiru.
Kanneen mormiif daanditti bahan Ameerikaan ejjennoo ishee akka deebitee ilaaltu gaafataniiru. Kan hiriira bahan gidduu kanneen suuraa Pirezidantii Chaayinaafi Raashiyaa qabatanii bahanis turani.
Kana dura murtee manni maree nageenyaa UN dhimma Tigraayin walqabatee ejjennoo waloo qabachuuf yaaliin taasise mormii Chaayinaafi Raashiyaan fashalee ture.
Suuraan bulchitoota biyyoota US mormanii daandiirra mul'achuun Itoophiyaan fuula ishee gara biyyoota Bahaatti garagalfachuu heddi jedhanii namoonni muraasni akka gaafatan taasiseera.
Dhimma kana kan gaafataman Ambaasaaddar Diinaan 'michuu filachuutti hin jirru,' jedhan.
Itoophiyaan biyyoota kamuu waliin hariiroo ishee cimsachuu barbaaddi jedhan. ''Itoophiyaan kanarra kana naaf wayya jettee kan itti filattu hin qabdu, yoo dirqamte malee.''
''Gama biyyoota Lixaas ta'e biyyoota Bahaa waliin hariiroo qabnu hojii cimsuurratti ko'oomne. Wanti jiruus kanuma,'' jechuun himan.
''Chaayinaa waliin hariiroo baay'ee cimaa qabna. Hangasuma immoo biyyoota Lixaa waliin hariiroon qabnu cimaadha. Sababa kanaaf nuti filannoo michuu, kanarra kana nuu wayya keessa haalli nu galchu hin jiru. Imaammanni hordofnuus kanuma.''
Waa'ee haasaa Obbo Shimallis...
Torban darbe gaafa Kibxataa Pirezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa sagantaa kilabii Faasil Kanamaa deeggaruuf qophaa'e irratti bakka Ministirri Dhimma Alaa biyyattii argamanitti ''Qamadii tortore qofatu nutti hafa. Osoo nutti hafe wayya,'' jechuun US qeeqanii turan.
Dhimma kana ibsa gaafa Roobii kaleessaa kennan irratti kan gaafataman dippilomatiin olaanaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii ''yaada dhuunfaati,'' mootummaa bakka hin bu'u jechuun ibsan.
Itoophiyaa Ameerikaa Shimallis Abdiisaa Diinaa Muftii
Aug. 22, 2020, 6:10 a.m.
"Itoophiyaatti mirgi namoomaa itti fufiinsaan sarbamaa jira" — Miseensonni Mana Maree Ameerikaa
Nov. 11, 2021, 2:32 p.m.
"Waraanni Kaabaa nagayaan akka hiikamuuf, TPLF haal-dureewwan sadi guutuu qaba" - Diinaa Muftii